नेपाली कांग्रेस मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं। १ निवासी ४९ वर्षीया राज्य लक्ष्मी शाहीको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त
नेपाली कांग्रेसु मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. १ निवासी ४९ वर्षीया राज्य लक्ष्मी शाहीको आज काठमाडौंमा निधन भयो । उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरियो । स्वर्गीय शाही नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति मुगुका जिल्ला सभापति एवं जिविस मुगुका सभापति स्व. बखत बहादुर शाहीका धर्मपत्नी हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल महिला संघमा उहाँ सक्रिय रुपले सहभागी हुँदै आउनु भएको
थियो । विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्दका बेला २०५९ सालमा माओवादीले उहाँका श्रीमान्लाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । स्वर्गीय शाहीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । उहाँका दुई छोरा र एक छोरी हुनुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले उहाँको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ । उहाँको निधनले पार्टीले एक कुशल महिला नेतृ गुमाएको छ र उहाँको निधनबाट पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको समेत बताउनु भएको छ । साथै, सभापति देउवाले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँका शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ ।
उहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा पु¥याउनु भएको योगदानको नेपाली कांग्रेस स्मरण गर्दछ । उहाँको निधनप्रति नेपाली कांग्रेस गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै, दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामनाका साथ उहाँका शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ ।